News Collection: के हो सेक्सटोयज ?
यौनसन्तुष्टि प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने कृत्रिम यौनसामग्री नै सेक्सटोयज हो, जुन ठ्याक्कै उही आकार र रंगमा उपलब्ध हुन्छ। यसका थुप्रै भेराइटिज छन्। आफैं सन्तुष्टि पाउनुका साथै अरूद्वारा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। यौन खेलौनाका बारेमा थुप्रै गलत धारणा विद्यमान छन्। भनिन्छ, एक्लो र सेक्सुअल पार्टनर नभएका व्यक्ति, समलिंगी (गे अथवा लेस्बियन) हरूले यसको प्रयोग गर्छन् तर सत्य अर्कै छ। यसको प्रयोग सबै व्यक्तिले उत्तिकै गर्छन्। कोही एक्लो भएका बेला वा यौन मित्रसँगै यौन आनन्दका लागि यस्ता सेक्सटोयज प्रयोग गरिन्छ। सेक्सटोयज क्वालिटीयुक्त सफा एवं आकर्षक हुनुपर्छ ।
यसको प्रयोगबाट यौनजन्य सरुवा रोगबाट बच्न सकिन्छ। सेक्सटोयज मुख्यतः माड्ने, दल्ने र भाइब्रेटर हुन्छन् जुन यौनांग र मलद्वारमा यौनसम्पर्कका बेला प्रयोगमा ल्याइन्छ।
सहवासमा सेक्सटोयजको प्रयोग
कहिलेकाहीँ आफ्नो यौनप्यासका सम्बन्धमा आफ्नो सेक्स पार्टनरलाई भन्न गाह्रो हुन्छ। नयाँ खालको रमाइलो गर्ने कुरामा उनीहरू आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। कतिपयमा सेक्सटोयज प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता हुन्छ। इमान्दारिता र खुला रूपमा आफ्नो सेक्स पार्टनरलाई यस विषयमा बताउनुपर्छ, जसले गर्दा यौन सम्पर्कका बेला यस्ता सेक्सटोयजको प्रयोगका सम्बन्धमा दुवैमा सकारात्मक धारणाको विकास भै पूर्ण यौनसन्तुष्टिको भागीदार हुन सकिन्छ। सेक्स पार्टनरलाई के गर्न मन लाग्छ ? उसले यौनलाई कसरी स्वीकार गर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर सेक्सटोयज स्वस्थ हुनुपर्छ जस्ता कुराको ख्याल गरे यसले जीवनलाई आनन्ददायक बनाउने दाबी गरिन्छ।
कस्तो खालको सेक्सटोय छान्ने अथवा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ। यसको प्रयोग आनन्दायक र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यौनजन्य संक्रमणरहित हुनुपर्छ।
सेक्सटोयजको प्रयोगअघि त्यसको क्वालिटी र अवस्थामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। नरमपन पनि जाँच्नु आवश्यक हुन्छ। सेक्सटोय च्यातिएको अथवा भाँचिएको पनि हुन सक्छ।
सेक्सटोयजको प्रयोगमा चिल्लो पदार्थको ठूलो भूमिका हुन्छ जसले सुरक्षित यौनआनन्द प्रदान गर्छ। यसका लागि आफ्नो यौन खेलौनाअनुरूपको उच्चस्तरीय चिल्लो पदार्थ (लुब्रिकेन्ट) बजारमा उपलब्ध हुन्छ।
सबै यौन खेलौना साटासाट गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्ता सामग्री कसैलाई दिँदा यौन संक्रमण हुनसक्छ।
नधोइएको र कन्डम प्रयोग नगरिएको सेक्सटोय मुख र महिला यौनअंगमा लगाउनु हुँदैन, किनभने सेक्सटोयलाई गुदद्वारमा पनि प्रयोग गरिएको हुनसक्छ। बिना सावधानी प्रयोग भए यसबाट महिलाहरूको पिसाब नलीमा संक्रमण हुन सक्छ।
यदि सेक्सटोयको प्रयोगले पीडा भए तत्काल सम्भोगक्रिया रोक्नुपर्छ। आफ्नो पार्टनरसँग सेक्सटोय प्रयोग गर्दा एक-अर्कामा विश्वास आवश्यक हुन्छ। पुनः इच्छा भए केही बेर आराम गरेर सेक्स टोयमा थप चिल्लो पदार्थ लगाई काम सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सेक्सटोय महँगो हुन्छ। यसको प्रयोग बारम्बार गरिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई जोगाउन उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। यौनजन्य संक्रमण र जीवाणु आक्रमणबाट बच्न पनि सेक्सटोयलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। केही रोगका जीवाणु सेक्सटोयमा लामो समयसम्म रहन सक्छन्। हेपाटाइटिस र स्क्याबिजजस्ता रोगका जीवाणु केही सातादेखि महिना दिनसम्म जीवित हुन सक्छन्। त्यसका लागि सेक्सटोयलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
कडा सेक्सटोय जुन सिसा, स्टिल, कडा प्लास्टिक वा सिलिकनले बनेका हुन्छन्। सिसालाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। नरम सिसाबाट बनेका साधन साबुन-पानीले धुँदा सफा हुन्छन् भने यस्ता सेक्सटोयलाई तातो स्थानमा राख्नु हुँदैन। स्टिलबाट बनेका सेक्सटोयमा विद्युतीय मेसिन जोडिएको भए हल्का मनतातो साबुन पानि प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि विद्युतीय मेसिन प्रयोग नभएको खण्डमा त्यसलाई ब्लिच र पानीको घोलमा १० मिनेट उमालेर सुकाउनुपर्छ। कडा प्लास्टिकबाट निर्मित सेक्सटोयलाई एन्टिब्याक्टेरियल साबुन-पानीले धुनुपर्छ भने यसलाई पानीमा उमाल्नु हुँदैन। सिलिकनबाट बनेका सेक्सटोयलाई पाँच मिनेट उमाल्नुपर्छ, त्यसपछि धुनुपर्छ। सिलिकन टोयलाई एन्टिब्याक्टेरियल साबुन र तातो पानीले धुनुपर्छ। सिलिकनबाट बनेका भाइब्रेटरलाई उमाल्नु हुँदैन, किनभने त्यसले भाइब्रेटरको आन्तरिक संरचना बिगार्न सक्छ।
नरम सेक्सटोयहरू रबर, रेक्जिन, नाइलन तथा छालाबाट बनेका हुन्छन्। रबरबाट बनेका सेक्सटोय पारदर्शी र नरम भएकाले सफा गर्न गाह्रो हुन्छ। यो विभिन्न केमिलकको मिश्रणबाट बन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ। त्यस कारण यस्ता सेक्सटोयको प्रयोगमा कन्डम युज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। रेक्जिनबाट बनेका सेक्सटोय एकदम नरम र धुन कठिन हुन्छन्। यसबाट धेरैजसो कृत्रिम लिंग बनेका हुन्छन्। यसलाई नरम तातो पानीले मात्र धुनुपर्छ। सुकाएपछि यसलाई सफा र चम्किलो साथै धूलो नटाँसिने बनाउन पाउडर लगाउनुपर्छ। नाइलनबाट निर्मित सेक्सटोयलाई एन्टिब्याक्टेरियल साबुन-पानीले धुन सकिन्छ। छालाबाट बनेका सेक्स्ाटोयहरू पनि धुन मिल्ने खालका हुन्छन्। यसलाई सफा गर्दा लेदर कन्डिसनर प्रयोग गर्नुपर्छ।
विश्वका लाखौं व्यक्तिको यौनचाहनालाई यस्ता सेक्सटोय निर्माण कम्पनीले विभिन्न प्रकारको यौनसामग्री उत्पादन गरी पूरा गरिरहेका छन्। यस्ता सेक्सटोयबाट मानिसहरूले राम्रै फाइदा लिने गरेका छन्, अर्थात् सेक्सटोय पनि उनीहरूको यौन सन्तुष्टि पाउने माध्यम बनेको छ। यसको प्रयोगले थुप्रैलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुयाएको छ।
सेक्सटोयले यौनव्यवहारमा विविधता ल्याउनुका साथै यसले यौनसम्बन्धमा पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गरेको दाबी गरिन्छ।
सेक्सटोयले मानिसको यौनआकांक्षा पूरा गर्छ। यसले यौन सम्बन्धलाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
यसले राम्रो यौनसम्बन्धलाई पनि मसालेदार बनाउन सहयोग गर्छ।
सेक्स पार्टनरबाट सन्तुष्टि नमिलेको अवस्थामा यसबाट आफ्नो इच्छानुसार यौनसन्तुष्टि लिन सकिन्छ।
सेक्स पार्टनर टाढा भएका बेला यसको प्रयोग गरी सन्तुष्टि लिन सकिन्छ।
सेक्सटोयको प्रयोगले पूर्ण यौनसन्तुष्टि दिनुका साथै तनावबाट पनि मुक्ति दिन्छ।
सेक्सटोयले यौन सक्रियता बढाउँछ।
पार्टनरलाई यौनचाहना नभए यसको प्रयोग गरी आफूले सन्तुष्टि लिन सकिन्छ।